पैसा संकलन गर्नु भन्दा पैसाको सहि प्रयोग हुनु ठुलो कुरा हो ! - RatoKalam.com is No one news portal.
पैसा संकलन गर्नु भन्दा पैसाको सहि प्रयोग हुनु ठुलो कुरा हो !
पहिलो कुरो, यो लेख लेखिरहँदा कसैप्रति मेरो पूर्वाग्रही छ भनेर कति पनि सम्झिरहेको छैन । कुनै लक्षित समुदायको सहयोगको लागि सामाजिक संजाल मार्फत आर्थिक संकलन अभियान सुरु गर्नु भनेको चानचुने कार्य हुँदै होइन । यस्तो कार्य महान कार्य नै हो, तर यस्तो महान कार्य महान कार्यको रुपमै रहिरहनको लागि हरेक पाटो पारदर्शी अनि सहयोगको सहि प्रयोग हुन एकदम जरुर हुन्छ । हामीले धेरै चोटी देखेको छौ, यस्तो कार्यले धेरैको जीवन स्तरमा आमुल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । सहयोग गर्नु नराम्रो कार्य हुँदै होइन, तर सहयोग गरेपछि लक्षित समुदायमा आएको परिवर्तन मुख्य कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
म मेरो चाहना अनुसार जसलाई जति अनि जुनै बेला पनि सहयोग गर्न सक्छु, यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । सहयोग भनेको जबर्जस्ती तरिकाले माग्ने होइन, तर सहयोग माग्नु गलत हो चाहिं मैले भनिरहेको छैन । यहाँ म धेरै छुच्चो हुन खोजेको होइन । मैले पनि अरुको लागि धेरैसँग आर्थिक सहयोग मागेको थिएँ अनि त्यो सहयोगलाई सहि रुपमा प्रयोग पनि गरेको थिएँ । सहयोग माग्ने हो, तर मागेको सहयोगको कसरि प्रयोग भयो भनेर देखाउनु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पछिल्लो चोटी, पूर्वी नेपालको भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका करिब ७ हजार भुटानी शरणार्थीहरुको लागि त्यहीं शिविरबाट अमेरिकामा आएका पुर्व भुटानी शरणार्थीको सक्रियतामा आर्थिक सहयोग संकलन कार्य सुरु भएको छ भन्ने कुरा अमेरिकामा रहेका धेरै भुटानीहरुलाई जानकारी नै छ । एउटै समुदायलाई सहयोग गर्नको लागि यहाँ अमेरिकामा दुइटा समूहले आर्थिक संकलन गर्दैछन् भन्ने कुरा सुन्न पाउँदा कहिले काहीं खुब मज्जाले हाँसो लाग्छ । दुइटा मात्र होइन, हजारौ समूहले सहयोग संकलन गर्दा पनि मलाई हुने केहि होइन ।
फेरी, सहयोग संकलन गरेको देखेर यो हेमे किन हाँसेको होला भन्ठान्नु भएको होला, तर कुरा अर्कै छ । खास कुरा के हो भने, शिविरमा रहेका शरणार्थीको सहयोग लागि यहाँ अमेरिकामा मान्छेहरु जुटिरहेको छन् उता शिविरमा शिविरका अगुवाहरु यहाँ संकलन गर्दै गरेको सहयोग समबन्धी केहि थाहा नभएको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेख्छन । यो सब किन हुन्छ ? यस्तो महान कार्य गर्नु पुर्व सामाजिक अभियन्ताहरुले शिविरको शिविर व्यस्थापन समिति अनि अन्य निकायका मानिसहरुसँग छलफल गर्नु एकदम महत्वपूर्ण हो तर त्यो किन हुन सकेन ? यो सबको उत्तर सम्बन्धित पक्षले दिन्छ या दिंदैन केहि थाहा छैन, तर यति भन्छु, सहयोग गर्नु अनि सहयोग संकलन गर्नु नराम्रो काम हुँदै होइन । मलाई दुनियाँ घाँसहरुले जस्तै सोचे पनि यस्तो महान कार्यको लागि म सधै सकारात्मक नै हुन्छु अनि सक्ने जति सहयोग गर्न तयार नै हुन्छु अनि अरुलाई पनि यस्तो कार्यको लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु, तर यसपाली म चुपचाप छु किन कि, भुटानी शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने भन्दै फेसबुकमा आर्थिक संकलन गर्ने भनेर मात्र केहि हुँदैन । यस्तो कार्यको विषयमा समबन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु जरुरी हुन्छ । तपाईहरुको अभियान महान छ, तर मेरो केहि असहमति छ, त्यहीं कारण म चुपचाप थिए ।
हुन त, मेरा असहमतिले हुने केहि होइन तर, केहि सिमित व्यक्तिहरुले मात्र छलफल गरेर हुनेवाला केहि हुन्न, यस्तो महान अनि मनकारी कार्यको लागि सबैलाई सहभागिताको लागि अनुरोध गरेर सबैको राय सुझाव संकलन गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला । कुनै काम हत्तारले गर्दा त्यसको नतिजा सोचे जस्तो बन्दै हुँदै हुँदैन । धेरै नै ठुलो लक्ष्यको सहित स्थापन गरिएको आर्थिक सहयोग संकलन कार्यको लक्ष्यसम्म पुग्न धेरै भन्दा धेरै भन्दा पनि धेरै समय लाग्ला जस्तो मैले चाहिं देखिरहेको छु ।
अर्को कुरा, यो आर्थिक सहयोग कसले वितरण गर्ने हो ? कहिले वितरण गर्ने हो ? पैसा संकलन गरेर मात्र हुने केहि होइन, त्यो पैसाको सहि प्रयोग भयो कि भएन त्यो कुरा चाहिं पैसा संकलन गर्नु भन्दा ठुलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई यहाँ संकलन भएको पैसाले के दिने योजना छ ? कति परिवारलाई के दिने ? कस्तो परिवारलाई के दिने ? कि त्रिपाल र लत्ता कपडा मात्र दिने हो ? यस्तो अनेक विषयको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म सोचे जस्तो योजना अनि लक्ष्यमा पुग्न त्यति सजिलो छैन । म, अरु मानवता नै हराएका जस्तो गरि लेख्ने अनि बोल्नेहरु जस्तो हुँदै होइन । मैले सुनेको अनि देखेको छु, शिविरमा शरणार्थीहरु आफ्नै करणले नै शिविरमा बसेको हुन्, जति दुख पाए पनि त्यो सब उनीहरुकै कारणले पाएको हुन्, हामी किन सहयोग गर्नु भन्नेहरुको फेसबुक स्टाटस अनि अनुहार ।
यस्तो समयमा सबै सकरात्मक भएर एक अर्कामा हातेमालो गरेर मनकारी काममा लाग्नै पर्छ तर सिमित व्यक्तिहरुले मात्र यस्तो कार्यलाई आफ्नो ठेक्का नठानेर सबैलाई समावेश गराएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा मेरो राय रहन्छ । हामीहरुले यहाँबाट शिविरमा रहेका शरणार्थीहरुलाई स्थायी रुपमा सहयोग गर्न सक्दैनौ, सकेको खण्डमा त्यो झनै राम्रो हो । यदि, हाम्रो थोरै सहयोगको कारण शरणार्थीले प्रप्ता गर्दै आएका कुनै सेवा सुविधामा कुनै कटौती हुने सम्भावना छ भने, हामीहरुले सम्बन्धित सरोकारहरुसँग सहजीकरण गरेर शरणार्थीहरुको लागि अझ राम्रो वातावरण बनाउनगर्नु को लागि सहयोग पर्छ । अब कटौती हुनु नै के पो छ र ?
सबै कटौती भैसक्यो भन्नु होला तर यो सब कटौती हुनुको कारण के हो ? शरणार्थीहरुको सेवा सुविधाहरु हरेक चोटी किन कटौती हुन्छ ? शरणार्थी नेता अनि अगुवाहरुले यो विषयमा बुलुन्द आवाज किन उठाउदैनन ? विदेशमा हाम्रो मान्छेहरु छन् त्यताबाट सहयोग आइहाल्छ भनेर बोल्न छोडेको त होइन ? फेरी मैले यसो भनेर सहयोग नै गर्नु हुन्न भनिरहेको होइन, भन्न खोजेको के हो भने, एउटा मान्छे बाँच्नको लागि त्यो मान्छेलाई चाहिने सबै कुरा संस्थाले शरणार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । हाम्रो सहयोग स्थायी हुँदै होइन, हामीहरुले प्रत्येक व्यक्तिबाट सक्ने सिमित सहयोग गर्ने हो तर यति संस्थालाई दबाब दिएको खण्डमा संस्थाले शिविरमा अहिले रहेका एक एक जना शरणार्थीको आवश्कता पुरा गर्ने गरि सहयोग गर्नु पर्छ यदि गर्न सक्दैन भने, शरणार्थी समस्याको चाडो भन्दा चाडो समाधान गर्नु पर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।
हाम्रो पैसाले शरणार्थीहरुलाई दुई हप्ता सुख अनि खुसी मिल्ला, तर उनीहरुको जिन्दगी चलाउनको लागि संस्थाले स्थायी रुपमा दिंदै आएको कुनै पनि सेवा सुविधामा कटौती हुनु भयो भने, अहिले शरणार्थीहरुले भोग्दै आएको समस्या भन्दा ठुलो समस्या खडा हुन्छ अनि हामीले त्यो बेला के गर्ने ? हाम्रो अलिकति सहयोगको कारण शरणार्थीले प्राप्त गर्दै आएको कुनै पनि सेवा सुविधा कुनै पनि हालतमा कटौती हुनु हुँदैन । यस्तो हरेक विषयमा ध्यान नगरी सहयोग मात्र गर्ने भन्दैमा तातो खायो जलि मर्यो भन्ने तरिकाले काम गर्नु हुन्न । सम्पुर्ण मनकारीहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो महान कार्यको सबै योजना प्रस्तुत गरेर अझै महान बनाउनको लागि अनुरोध गर्दछु । पैसा संकलन गर्न भन्दा त्यो संकलित पैसाको सहि तरिकाले सहिरुपमा प्रयोग गर्नु ठुलो कुरा हो । हाल- कोलोराडो, अमेरिका